घर युरोपियन स्टार फेडरिको चियासा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
फेडरिको चियासा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। क्रेडिट्स: इन्स्टाग्राम र हेडब्यान्डसेन्डब्रेक
सुरू गरेर, उनको उपनाम छ “Pepo“। हाम्रो लेखले तपाईंलाई फेडरिको चियासा बाल्यकाल कहानी, जीवनी, पारिवारिक तथ्य, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र अन्य उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज प्रदान गर्दछ जब उहाँ बाल्यकालदेखि नै लोकप्रिय हुनुभयो।
फेडरिको चियासाको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट्स: इन्स्टाग्राम र ट्रान्सफरमार्केट।
हो, सबैलाई थाहा छ उनी एक प्रतिभाशाली, पासेसी र मेहनती विger्गर हो। यद्यपि, केहिले हाम्रो फेडरिको चियाको जीवनीको संस्करणलाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब, थप कुनै विज्ञापन बिना, सुरु गरौं, पहिले सुरु गरौं फेडरिको चियाको विकीहाम्रो पछि विषय सूची आफ्नो पूर्ण कहानी अघि।
फेडरिको चियासा जीवनी तथ्य (विकी)
पुरा नाम: Federico Chiesa
जन्म र उमेर मिति: २ October अक्टोबर १ 25 1997 ((उमेर २२ मार्च २०२० सम्म)
जन्मस्थान: जेनोवा, इटाली
अभिभावक: फ्रान्सेस्का लोम्बार्डी (आमा) र एनरिको चीसा (पिता)
Siblings: एड्रियाना (सानो बहिनी) र लोरेन्जो (कान्छो भाई)।
पूर्व प्रेमिका: Caterina Ciabatti (२०१ in मा अलग)
वर्तमान प्रेमिका: बेनेडेटा क्वागली (२०१ 2019 मा डेटि began सुरु भयो)
व्यवसाय :: फुटबलर (विger्गर)
प्रारम्भिक फुटबल शिक्षा: युएस सेटटिभानिज, फ्लोरेन्स, इटाली।
फेडरिको चीसाको बाल्यकाल कहानी:
फेडरिको चियाको परिवार पृष्ठभूमि:
फेडरिको चियासाको शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप:
फेडरिको चियाको फुटबलमा प्रारम्भिक वर्षहरू:
फेडरिको चियासाको जीवनी- फेम टु फेम स्टोरी:
फेडेरिको चियाको प्रख्यात कथा उठ्ने:
फेडरिको चियाको प्रेमिका पत्नी र बच्चाहरू:
फेडरिको चियाको पारिवारिक जीवन:
फेडरिको चियाका पिताको बारेमा बढि:
फेडरिको चियासाको आमाको बारेमा:
फेडरिको चियाका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
फेडरिको चियाका नातेदारहरूको बारेमा:
फेडरिको चियासाको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा:
फेडरिको चियाको जीवनशैली:
फेडरिको चियाका तथ्यहरू:
तथ्य #2- धुम्रपान र मदिरा:
तथ्य # - - जसलाई उनले आइडलाइज र प्रशंसा गर्छन्:
फेडरिको चियासाको प्रारम्भिक ज्ञात बालबालिकाहरू मध्ये एक। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
शुरुवातकर्ताहरूको लागि फेडरिको चियाको जन्म अक्टोबर १ 25 1997। को २ XNUMX औं दिन आमा, फ्रान्सेस्का लोम्बार्डी र बुबा एनरिको चीसाको उत्तर पश्चिमी इटालीको जेनोवा बन्दरगाहमा भएको थियो। फेडरिको चीसाका आमा बुबाले उनलाई उनका तीन प्यारा बच्चाहरू (पुरुष र महिला) मध्ये पहिलोको रूपमा दिएका थिए।
फुटबल प्रतिभा इटालियन पारिवारिक जरा र लिगुरियन जातीयताको साथ एक यूरोपीय नागरिक हो। उनी आफ्नी कान्छी बहिनी एड्रियाना र धेरै कान्छो भाइ लोरेन्जोसँग इटालीस्थित फ्लोरेन्समा हुर्केका थिए। तल फेडरिको चीसाका भाईबहिनीको प्यारा बाल्यकालको फोटो छ।
फेडरिको चियासाको उनकी दुलही एड्रियाना फ्लोरेंसमा हुर्किएको दुर्लभ बचपनको फोटो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
फ्लोरेन्समा हुर्केका, फेडेरिकोले दुई वर्षको उमेरदेखि नै फुटबल खेल्न शुरू गरे जुन उनी हिंड्न कसरी जाने भनेर सिकेका थिए। फुटबलमा उनको शुरुवात न त भाग लिन अन्य बाल्यकाल खेलको अभावबाट आएको हो न त उसका बाबु-आमाले यसमा अभिप्राय राखेको छ।
बरु यो DNA को प्रश्न हो किनकि फेडरिको एक उच्च श्रेणीको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट हो जुन फुटबलको जीवन र सास फेर्छ, उनीको बुबा - एरिकिको फुटबल संलग्नताका लागि धन्यवाद जुन त्यस समयमा एक पेशेवर फुटबल खेलाडी थिए।
जस्तो कि, यो ध्यान देने योग्य छ कि यस खेलको लागि तत्कालीन युवा जोश वंशानुगत थियो र आफ्नो बुबाले उनलाई सम्भाव्यता देखेको पालना गर्थे, साथसाथै उनको आमा जो उनका पतिका फुटबल स engage्लग्नता र सल्लाहकारका प्रशंसक थिए। तल फेडरिको चियाका आमा बुबाको उनीहरूको खेलको मिठो फोटो छ पालनपोषण उसमा भूमिका प्रेम, ध्यान, समझ, स्वीकृति, समय, र क्यारियर समर्थन।
फेडेरिको चिआका आमा बुबालाई भेट्नुहोस् जो आफ्नो प्रारम्भिक जीवनमा फुटबल प्रतिभालाई अपार समर्थन गर्थे। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
फेडरिको चियाका आमाबुवाले उनलाई स्थानीय क्लब युएस सेटिगानीजसँग भर्ना गराएका थिए जुन फ्लोरिसमा F वर्षको उमेरमा उनीहरूको परिवारको घरकै नजिक थिए। उनले भर्ना हुन अघि स्थानीय क्लब युएस सेटिगेन्नीसँग प्रशिक्षण सुरु गरे। Fiorentina तीन वर्ष पछि एकेडेमी। सानो क्लबसँग खेल्दा फेडरिको चियाका आमाबुवाले उनलाई इन्टर्नेशनल स्कूल अफ फ्लोरेन्समा शिक्षा प्राप्त गर्न शुरू गरे जुन युरोपको सब भन्दा पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय स्कूल हो।
विकास भनेको फिडेरिकोको भविष्य राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु थियो फुटबलमा उसको क्यारियर निर्माणको खुशी नै अन्त्य होस् वा नहोस्। फेडरिको राम्रो अध्ययन गरेर उनीहरूलाई खुशी बनाए र पछि विश्वविद्यालय स्तरमा खेलकुद विज्ञान पढ्न पनि गए।
फिओरेन्टीना एकेडेमीमा फुटबल खेल्दा पनि उनी अध्ययनमा उत्कृष्ट थिए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
यद्यपि फेडरिको को फुटबल सments्लग्नतामा कमी भएको फेला परेन। वास्तवमा, उहाँ कहिले पनि यो कुरा सम्झन रोक्नु हुन्न कि उनका बुवाले उनलाई सँधै तालिम लिनको लागि १००% तालिम दिन भन्नुभएको थियो।
नतीजाको रूपमा, युवा फेडरिकोको समूहको रूपमा देखिन्छ Fiorentina चाँडो र योग्य थियो किनभने ऊ आफ्नो फुटबल जरा वा वंशानुगत शीर्षक को मान्यता मा खेल्न बनाइएको थिएन। बरु उहाँ बलियो र महत्वाकांक्षी भएर आफ्नो प्रवास र पदोन्नतीहरू कमाउनको लागि बनाइएको थियो।
Fiorentina एकेडेमी जीवन को केहि स्थानहरु हो जहाँ सिफारिस वा वंशानुगत शीर्षक गणना छैन। केवल मुख्य कुरा मेरिट हो र ऊ त्यो विभागमा अभाव थियो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
दुई सत्र (२०१––२०१19) को लागि फियोरेन्टीना अण्डर १ squad टीमको साथ महत्वपूर्ण खेलाडी फेडेरिकोले फेब्रुअरी २०१ 2014 मा क्लबसँग पहिलो व्यावसायिक सम्झौता पायो र जुभेन्टसको बिरूद्ध २-१ ले पराजित गर्दै प्रतिस्पर्धी बनायो।
त्यस पछि, उनले आफ्नो खुट्टा र पहिचान पाउनको लागि केही संघर्ष गरे। युरोपा लिग १-२ मा Qaraba Q मा जीत पछि आफ्नो पहिलो व्यावसायिक गोल पछि पनि फेडेरिको एकै खेलमा डबल बुकि forको लागि पठाइएको थियो। यो हुनसक्छ, फेडेरिको चीसाको जीवनीको क्षणहरू मध्ये एक हो जुन कठिन छ।
राम्रो फार्मको अभावमा डबल बुकि meets पूरा हुँदा फुटबल प्रतिभाशालीहरूले बनाउने अनुमानित अनुहार। छवि क्रेडिट: गोल।
यो अर्को बर्ष सम्म थिएन, विशेष गरी जनवरी २०१ 2017 मा फेडरिकोले स्थिरता फेला पारे र एउटा सम्झौता विस्तार पाए जुन उनी फिओरेन्टीनामा जून २०२१ सम्म शीर्ष उडान फूटबल खेलिरहेको देख्न सक्थे।
विger्गरले आगामी वर्षहरूमा फीरेन्टीनाको लागि सेरी एमा मुख्य गोल र उद्घाटन गोल गर्न सुरू गर्यो। उनले २०१२ जनवरीमा कोपा इटालियाको क्वार्टर फाइनल खेलको समयमा रोमाको बिरुद्ध their-१ को घरको जीतमा क्लबको लागि पहिलो ह्याट्रिक पनि लिएका थिए।
यद्यपि उहाँ वि win्गर नै हुनुहुन्थ्यो, तर फ्यान मनपर्दो र म्याच अफ म्याच बन्नको लागि उनले तीन पटक अंक बनाए। छवि क्रेडिट: यूट्यूब।
फेडेरिको चियासा जीवनलाई माया गर्थे, उनको दुई गर्लफ्रेन्डहरू थिए जसको कुनै छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) सँग विवाह थिएन (लेखेको समयमा)। पहिलो क्याटरिना सियाबट्टी थियो, उनी एक सुन्दर महिला हुन् जसले उनी २०१ 2017 मा भेटे। उनीहरूले छिट्टै टस्कनीमा अर्नोको किनारमा रहेको घरमा बस्न थाले। दुःखको कुरा, देखिने उत्तम प्रेम चराहरूले पछिल्लो २०१ birds मा बिभिन्न तरिकाहरूमा पसे।
फेडरिको चिया पहिलो पटक रोमान्टिक रूपले क्याटरिना सियाब्ट्टीसँग सम्मिलित थिए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
महिना पछि, फेडेरिकोले २०१ 2019 मा बेनेडेटा क्वागलीसँग डेट गर्न सुरू गर्यो र इन्स्टाग्राममा राम्रो समय बिताएको फोटोहरू अपलोड गरेर उनीहरूको सम्बन्धलाई चिनायो Lovebirds गहिरो प्रेम मा छन् र निकट भविष्यमा उनीहरु पति र पत्नी को रूप मा जोडी लक्ष्यहरु को सेवा गर्न सक्छ कि सम्भावना अस्वीकार छ।
फेडरिको चियाको दोस्रो प्रेमिका बेनेडेटा क्वालीलाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
अचम्मको विger्गर मायालु र सहयोगी परिवारको उत्पादन हो। यो खण्डमा हामी फेदेरिको चियाका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा-बुबाबाट शुरू गर्ने थप जानकारी ल्याउँदछौं।
पूर्व पेशेवर फुटबल प्लेयर एनरिको चिया फेडरिकोको बुबा हो। उहाँ डिसेम्बर १ 29 .० को २ th तारिख जेनोवा इटालीमा जन्मनुभएको थियो। उनले एमेच्योर क्लब पोन्टेटेसिमोमा प्रतिस्पर्धी फुटबल खेल्न शुरू गरे र १ 1970 1989 in मा सम्पादोरियासँग पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। प्रशंसक गोल स्कोररको रूपमा ख्यातिप्राप्त एनरिकोले आफ्नो करियरको अर्को दुई दशक शीर्ष इटालियाली टिमहरूको लागि खेले जसमा पर्मा, फिरेन्टीना र Lazio
फेडरिको चियाका बुवा पर्मा सहित धेरै इटालियन क्लबहरूको लागि गोल गोलकर्ता थिए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
२०१० मा उनले फिगलाइनमार्फत आफ्नो क्यारियर समाप्त गरे र आफ्नो छोरा जस्ता युवाहरूलाई शीर्ष उडान फूटबलमा सिकाएर सेवानिवृत्तिबाट आनन्द लिइरहेका छन्। यसमा कुनै शo्का छैन कि फेडेरिको उसको बुवासँग नजिक छ जसले उसलाई उचित खेलको महत्व र खेलाडी र रेफ्रीको सम्मानका बारे पेशेवर सल्लाह दिने श्रेय दिन्छ। सबैभन्दा माथि, ऊ कसले वि win्गर खेल्नुपर्दछ त्यसमा जान सक्दैन तर त्यस पक्षलाई आफ्नो प्रशिक्षकमा छोड्छ।
एनरिको फेडेरिकोका बुबा मात्र होइनन् एक पेशेवर सल्लाहकार पनि हुन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
फ्रान्सेस्का लोम्बार्डी फेडरिकोको आमा र विger्गरको आमा बुबाको सबैभन्दा कम लोकप्रिय छ। यो किनभने विger्गरले अझै कुरा गर्ने छैन वा साक्षात्कारको बेलामा उनीसँग सन्दर्भ बनाउने कुरा हो। त्यसकारण, उनी तीनजनाकी आमाको बारेमा धेरै जान्दैनन् किनकी उनी आफ्नो पतिको लागि असल पत्नी र आफ्ना बच्चाहरूलाई सहयोग गर्ने आधार हुन्।
फेडेरिको चिआसको आमालाई भेट्नुहोस् जसले आफ्नो प्यारो छोरासँग राम्रो समय बिताउँदैछन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
फेडरिको चियाका परिवारका तत्काल सदस्यहरू आफैं, दुई साना भाई बहिनीहरू (उनको बहिनी एड्रियाना र भाइ लोरेन्जो) र अभिभावक। तपाईंलाई थाँहा थियो?… एड्रियानाले मिलन विश्वविद्यालयमा फेब्रुअरी (२०२०) मा विद्यालयहरूको तल चित्रण गर्‍यो - जहाँ उनी अर्थशास्त्र पढाउँछिन्।
फेडरिको चियाका भाई - बहिनी र उनका भाइलाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
उनको पक्षमा, फेडेरिको चियाका भाई लोरेन्जो लेख्ने समयमा, फियोरेन्टीनाको युवा प्रणालीमा खेल्छन् र आफ्ना ठूला भाइले जस्तै सफलता हासिल गर्ने आशा राख्दछन्।
फेडरिको चिसाको परिवार पुर्ख्यौलीको सम्बन्धमा, त्यहाँ उनको बुवा र बुवा हजुरआमाको कुनै रेकर्ड छैन, जबकि उनका काका, बुआ, भतिजा र भतिजीहरू यस जीवनी लेख्दा प्रायः अज्ञात छन्।
के तपाईंलाई थाहा छ फेडेरिको चियाले व्यक्तित्वका लक्षणहरू समेट्छ जुन व्यक्तिको द्वारा प्रदर्शित हुन्छ जसको राशिफल चिन्ह वृश्चिक हो? उहाँ भावुक, सहज, उत्कृष्ट र मेहनती हुनुहुन्छ।
फेडरिको चियाको व्यक्तित्वको विशेषताहरूमा थपियो उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा धेरै कुरा बताउनुहुन्न भनेर पन्चेन्ट हो। विger्गरको रुचि र शौकमा अध्ययन, भिडियो गेमहरू खेल्न र आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउनु समावेश छ।
उसले फुर्सतका लागि के गर्छ हेर्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
फेडरिको चिया कसरी पैसा कमाउँदछन् र कसरी खर्च गर्छन् भन्ने सन्दर्भमा उनीसँग यस जीवनी लेख्दा net २ लाखको कुल सम्पत्ति छ। विger्गरको सम्पत्तीको स्ट्रिमहरू जुन उसले माथि उडान फूटबल खेल्दा ज्याला र तलबबाट लिन्छ।
विger्गरले समर्थनबाट महत्वपूर्ण आम्दानी पनि लिन्छ। जस्तो कि, उनीसँग सुपर-एक्सोटिक कारहरूमा यात्रा गर्न वा इटालीको महँगो घरहरू र अपार्टमेन्टहरूमा बस्न कुनै समस्या छैन।
यो एक सुपरकारमा फुटबल प्रतिभाको एक दुर्लभ तस्बिर हो जुन हामी थोरै जान्दछौं। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
हाम्रो फेडरिको चियासा बचपनको कथा र जीवनी समाप्त गर्न, वि the्गरको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
जबदेखि उनले क्लब फुटबल दृश्यमा भड्काए पछि फेडेरिको चियाले कति कमाउँछन् भन्नेमा त्यहाँ चासो छ। सत्य हो, टीउनी ACF Fiorentina संग इटालियन को सम्झौता उसलाई वरिपरि एक ठूलो तलब जेब देख्नुहुन्छ €..१ मिलियन यूरो प्रति वर्ष। अधिक आश्चर्यजनक तल फेडरिको चियासाको तलब ब्रेकडाउन प्रति वर्ष, महिना, दिन, घण्टा, मिनेट र सेकेन्ड हो (लेखेको समयमा जस्तै).
युरो मा आय
अमेरिकी डलरमा आय
प्रति वर्ष € 3,100,000 £ 2,600,000 $ 3,498,815
प्रति महिना € 258,333 £ 216,667 $ 291,568
प्रति हप्ता € 59,615 ,50,000 XNUMX $ 72,892
प्रति दिन € 8,493 £ 7,123 $ 10,413
प्रति घण्टा € 354 £ 297 $ 433.9
प्रति मिनेट € 5.90 £ 4.95 $ 7.2
प्रति सेकेन्ड € 0.10 £ 0.08 $ 0.12
तपाईंले यो पृष्ठ हेर्न सुरू गर्नुभएदेखि फेडेरिको चियाले कत्ति धेरै कमायो।
वाओ !. तपाईंलाई थाँहा थियो?… इटालीमा सामान्य मानिस कम्तिमा पनि काम गर्नु पर्छ 1.6 वर्ष कमाउन € 50,000, जुन Federico Chiesa एक महिना मा अर्जित रकम हो।
विger्गरले गैरजिम्मेवार रूपमा रक्सी पिउँदैन, न त उनीसँग धूम्रपानबाट उत्पन्न हुने जटिलता छ। ऊ शीर्ष उडान फुटबल मा आफ्नो सबै भन्दा राम्रो चासोको लागि एक स्वस्थ जीवनशैली कायम संग धार्मिक छ।
फेडरिकोसँग top बर्ष भन्दा कमको अनुभव छ शीर्ष उडान फूटबल खेल्ने, एक विकासले बताउँछ कि किन उनीसँग कम फिफा रेटिंग578 छ। यो एक ज्ञात तथ्य हो जुन समय ठीक हुन्छ र सुधार हुन्छ। The the को समग्र मूल्या rating्कन प्राप्त गर्ने सम्भाव्यता हुने विger्गरको लागि केस कुनै भिन्न हुँदैन।
हामी उसलाई त्यस सम्भावित मूल्या rating्कनमा बाँचेको देख्दा खुसी हुनेछौं। छवि क्रेडिट: SoFIFA।
यो फेडेरिको चियाको परिवारले इसाई धर्मको अभ्यास गर्दछ। यद्यपि इटालियन विger्गर आफैंले सार्वजनिक रुपमा अन्तर्वार्ताका बेला आफ्नो विश्वास दाबी गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि हाम्रो अडिगहरू इटालियनहरूको एक राम्रो संख्या जस्तो एक इसाई हुनुको पक्षमा छन्।
फेडरिको चियासँग निष्पक्ष उचाई feet फिट, inches इन्च र दागविहीन निष्पक्ष छाला छ। यद्यपि, उनले लेख्ने समयमा कुनै ट्याटूहरू पाएनन् र सायद शरीर कला प्राप्त गर्ने विचारलाई इश्कबाजी गरेनन्। ऊ सायद आफ्नो बुबाको रेकर्डसँग मिल्छ र पार गर्छ जस्तो देखिन्छ जुन शीर्ष फ्लाइट फुटबलमा २-दशकको क्यारियरको बेला कुनै ट्याटू थिएन।
बाबु जस्तै छोरा: के तपाईं सहमत हुनुहुन्न? छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
तथ्य #6- जसलाई उनले आइडियलाइज र प्रशंसा गर्छन्:
फेडेरिको चीसाको तथ्यको अन्तिम कुराकानी भनेको जसको बारेमा उनी मूर्ति बनाउँछन् र प्रशंसा गर्छन्। तपाईंलाई थाँहा थियो?… विger्गर ब्राजिलियन किंवदन्तीको प्रशंसा गर्दै हुर्कियो रिकार्डो काका आफ्नो बाल्यकाल को नायक को रूप मा। विger्गरले आफ्ना समकालीनहरूको पनि प्रशंसा गर्दछ Leroy sane र केविन डी ब्रुक म्यानचेस्टर सिटीमा उनीहरूको भूमिका खेल्ने प्रभावशाली तरिकाको लागि।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो फेडरिको चियासा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यांकहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।